မိသားစုအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများ | အပန်းဖြေပေးပါ။
ဣဇာက်သည် | 17/12/2021 17:47 | အဆင့်မြှင့်တင် 21/12/2021 09:02 | ယေဘုယျ
သင့်ချစ်သူ၊ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ သင့်မိသားစု သို့မဟုတ် သင့်သားသမီးများနှင့် အချိန်ဖြုန်းခြင်းထက် အရာအနည်းငယ်သည် ပိုကောင်းသည်။ နေ့တွေ၊ နေ့ခင်းတွေနဲ့ ညတွေကို အိမ်မှာ ကစားပြီး အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေမယ့် အမှတ်ရစရာ အခိုက်အတန့်တွေကို ချန်ထားခဲ့ပါ။ ၎င်းဖြစ်နိုင်စေရန်အတွက်၊ သင်သည်အချို့ကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။ မိသားစုအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများ။ ဆိုလိုသည်မှာ ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များ၊ လူကြီးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဘုတ်ဂိမ်းများ.
သို့သော်၊ ရနိုင်သောဂိမ်းအရေအတွက်နှင့် လူတိုင်းကို တန်းတူပျော်ရွှင်စေရန် မည်မျှခက်ခဲသည်ကို ဖော်ပြထားသောကြောင့် ရွေးချယ်ရန်မှာ လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အကောင်းဆုံး အကြံပြုချက်အချို့နှင့်အတူ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ အရောင်းရဆုံးနှင့် ပျော်စရာအကောင်းဆုံး မင်းဘာတွေ့နိုင်မှာလဲ...
1 မိသားစုနှင့် ကစားရန် အကောင်းဆုံး ဘုတ်ဂိမ်းများ
1.1 Diset Party & Co မိသားစု
1.6 စကားလုံးများဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မိသားစုများထုတ်ဝေ
1.8 Stuffed ဒဏ္ဍာရီများ
1.9 ဒိုင်း! Wild West ဂိမ်း
1.10 အခန့်မသင့်ရင် ဧည့်သည်တွေ မှုန်မှိုင်း
2 မိသားစုလိုက်ကစားရန် ပျော်စရာဘုတ်ဂိမ်းများ
2.1 Game Off ထိပ်တိုက်တိုက်ပွဲ တပ်ရင်း
2.2 Mimika ကို ဖြတ်လိုက်ပါ။
3 မိသားစုဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းကောင်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
မိသားစုနှင့် ကစားရန် အကောင်းဆုံး ဘုတ်ဂိမ်းများ
အထင်ရှားဆုံးများထဲတွင် မိသားစုလိုက်ကစားရန် ဘုတ်ဂိမ်းအချို့ရှိသည်။ သင့်ချစ်ရသူများနှင့် အကောင်းဆုံးအချိန်များကို ကုန်ဆုံးရန် အပန်းဖြေမှုနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အနုပညာလက်ရာများဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားများစွာရှိလေ့ရှိသည့် ကစားသမားများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်ခံခြင်းအပြင်၊ တချို့က အကြံပြုချက်များ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
Diset Party & Co မိသားစု
Diset - Party & Co မိသားစု...
၎င်းသည် ဂန္ထဝင်ပါတီဖြစ်သော်လည်း မိသားစုအတွက် အထူးထုတ်ဝေမှုဖြစ်သည်။ အသက် 8 နှစ်မှ စ၍ သင့်တော်ပါသည်။ ၎င်းတွင် သင့်အလှည့်ရောက်သည့်အခါ စမ်းသပ်မှုများစွာကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အသင်းများတွင် ကစားနိုင်သည်။ အတုယူပါ၊ ပုံဆွဲပါ၊ အတုယူပါ၊ မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပါ၊ ပျော်ရွှင်စရာပဟေဋ္ဌိများကိုဖြေဆိုပါ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ စိတ်ကူးပုံဖော်မှု၊ အသင်းကစားပုံနှင့် ရှက်ကြောက်ခြင်းကို ကျော်လွှားရန် နည်းလမ်းကောင်း။
အသက် 8 နှစ်မှ အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် သင့်လျော်သောဂိမ်း။ ၎င်းသည် ဂန္ထဝင်မေးခွန်းနှင့်အဖြေဂိမ်းဖြစ်သော်လည်း မိသားစုထုတ်ဝေမှုတွင် သင့်အသိပညာကိုစမ်းသပ်ရန် အထွေထွေယဉ်ကျေးမှုမေးခွန်း 2400 ပါရှိသော ကလေးများအတွက်ကတ်များနှင့် လူကြီးများအတွက်ကတ်များပါ၀င်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Showdown challenge တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။
Mattel ဂိမ်းများ -...
၎င်းတို့သည် အသက် 8 နှစ်မှ စတင်၍ ကစားနိုင်ပြီး ကစားသမား2ဦးမှ4ဦးအထိ ကစားနိုင်သည် သို့မဟုတ် အသင်းဖွဲ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည် မိသားစုများအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်မှာ စကားလုံး သို့မဟုတ် စကားစုများကို ပုံများမှတစ်ဆင့် ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။ အဖြူရောင်ဘုတ်၊ အမှတ်အသားများ၊ အညွှန်းကတ်များ၊ ဘုတ်အဖွဲ့၊ အချိန်နာရီ၊ အန်စာတုံးများနှင့် 720 ကတ်များ ပါဝင်သည်။
FAMILY BOOM - ဂိမ်း၏ ...
မိသားစုတစ်ခုလုံး ဤဂန္ထဝင်ဂိမ်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည်။ ကွဲပြားပြီး ပျော်ရွှင်စရာကတ် ၃၀၀၊ ဘုတ်တစ်ခု၊ ကစားရလွယ်ကူသည်၊ စိန်ခေါ်မှုများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ပဟေဠိများ၊ နှိမ့်ချမှု၊ လှည့်စားမှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း စသည်ဖြင့်။ သင်ချစ်ရသူအားလုံးကို စုစည်းပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော အချိန်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန် နည်းလမ်းကောင်း။
Family Boom ကိုဝယ်ပါ။
မိသားစုတစ်စုလုံး ကစားနိုင်သည်၊ အသက် 10 နှစ်မှ အကြံပြုထားသည်။ ၎င်းသည် ပဟေဠိများကိုဖြေရှင်းရန် သင်၏တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ပျော်စရာနှင့် တက်ကြွသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကစားသမားတစ်ဦးသည် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အရာကို ခန့်မှန်းနိုင်ရန် အခြားသူများ (ဇာတ်ကောင်များ၊ ခေါင်းစဉ်များ၊ အရာဝတ္ထုများ၊ ...) ကို မှန်းဆနိုင်ရန် universal icons သို့မဟုတ် သင်္ကေတများကို ပေါင်းစပ်ရပါမည်။
စကားလုံးများဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ မိသားစုများထုတ်ဝေ
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် မိသားစုလိုက်ကစားရန်နှင့် ပါဝင်သူများကြားတွင် သံယောဇဉ်များ ခိုင်မြဲစေရန်အတွက် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြေးများ၊ အဘိုးအဘွားများ၊ မိဘများနှင့် သားသမီးများအတွက် အယူခံဝင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး မတူညီသော စကားဝိုင်းအကြောင်းအရာများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပျော်စရာမေးခွန်းများနှင့် ရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ ကတ် 120 ဖြင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်များကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။
အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအတွက် မေးခွန်းများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများပါရှိသော မိသားစုအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများထဲမှ နောက်တစ်ခု။ အနိုင်ရရှိသူသည် ဘုတ်အဖွဲ့ကို ဦးစွာဖြတ်ကျော်သူဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော် ယင်းအတွက် သင်သည် မေးခွန်းများကို မှန်ကန်စွာရနိုင်ရမည်။ အုပ်စုများ ရောနှော၍ ကစားနိုင်သော်လည်း မိဘများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ကလေးများနှင့် အုပ်စုဖွဲ့ ကစားသည်။
သားသမီးများကို မိဘများ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ ဝယ်ယူခြင်း၊
ဤမိသားစုဘုတ်ဂိမ်းတွင်၊ ကစားသမားတစ်ဦးစီသည် ဆိုးသွမ်းလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအဖွဲ့အစည်းမှ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းခံရသောကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်သက်သောမိန်းကလေးကို ကယ်တင်ရန် အကြပ်အတည်းတစ်ခုစီ၏အခန်းကဏ္ဍကို ပါဝင်ကစားကြသည်။ ပါဝင်သော ပုံပြင်စာအုပ်သည် ဇာတ်လမ်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်အဖြစ် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ဘုတ်ပေါ်တွင် လိုက်နာရမည့် အဆင့်များ...
Stuffed Fables ကိုဝယ်ပါ။
ဒိုင်း! Wild West ဂိမ်း
ဖုန်ထူသောလမ်းပေါ်ရှိ Wild West ၏အချိန်များဆီသို့ သင့်အား ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမည့် ဖဲဂိမ်းတစ်ခု။ အဲဒီအထဲမှာ တရားမ၀င် ရဲအရာရှိ၊ လူဆိုးတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ရဲမှူးနဲ့ သစ္စာဖောက်သူတွေက ဘွမ်ဒိုတွေနဲ့ ပေါင်းဖို့ လျှို့ဝှက်အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ကြလိမ့်မယ်..။
အခန့်မသင့်ရင် ဧည့်သည်တွေ မှုန်မှိုင်း
ကြောက်စရာကောင်းသော ဧည့်သည်များ၊ လူဆိုးဂိုဏ်းများနှင့် အိမ်ကြီးတစ်လုံးပါရှိမည့် ဂိမ်းတစ်ခု။ ဘာတွေ မှားသွားနိုင်လဲ။ ၎င်းသည် အခြေခံဂိမ်းသို့ ချဲ့ထွင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသည့် Gloom ၏ ကတ်ဂိမ်းဖြစ်သည်။
အခန့်မသင့်သော ဧည့်သည်များ ဝယ်ယူခြင်း။
ဒါပေမယ့် သင်ရှာနေတာက နည်းနည်းပိုသွားပြီး ရယ်မောတာ၊ ရယ်မောပြီး ငိုတာ၊ ဗိုက်နာတာဖြစ်စေဖို့ ရယ်စရာအကောင်းဆုံး board games တွေကို ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒါက တခြားသူတွေပါ။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်စေမည့် ခေါင်းစဉ်များ:
Game Off ထိပ်တိုက်တိုက်ပွဲ တပ်ရင်း
ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားသူများအတွက် ဖန်တီးထားသည့် အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် သင့်လျော်သော မိသားစုဘုတ်ဂိမ်း။ သင်၏ဆွေမျိုးများနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရန်ထူးခြားသောတိုက်ပွဲ 120 ပါရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် သင်သည် သင်၏စွမ်းရည်၊ ကံကောင်းမှု၊ သတ္တိ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကို ပြသရမည်ဖြစ်သည်။ အလွန်လျင်မြန်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ပြိုင်ကားများကို ပြုလုပ်ထားပြီး ကျန်ကစားသမားများသည် အနိုင်ရသူကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဂျူရီလူကြီးများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ မင်းရဲလား
သင့်စိတ်ရှည်မှု၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့် အတုခိုးမှုမှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်မည့် မိသားစုများအတွက် အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခု။ ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် လူကြီးများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ လူတိုင်းသည် ပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ကစားပြီး အပြန်အလှန်ဆက်ဆံကြမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် မတူညီသော အမျိုးအစားများ၏ ကတ် 250 ပါ၀င်ပြီး အခြားသူများက သင်ဖော်ပြလိုသည့်အရာကို လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် ခန့်မှန်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤဂိမ်းသည် စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် ပျော်စရာဇာတ်လမ်းကို နှစ်သက်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အန်စာတုံး ၉ ခု (စိတ်အခြေအနေ၊ သင်္ကေတ၊ အရာဝတ္ထု၊ နေရာ၊ ...) ပါရှိပြီး သင်ဖန်တီးရမည့် ဇာတ်လမ်းများအတွက် ပေါင်းစပ်ပေါင်း ၁ သန်းကျော်ဖြင့် သင်ဖန်တီးနိုင်သည် ။ အသက်9နှစ်နှင့်အထက်အတွက်သင့်လျော်သည်။
Hasbro ဂိမ်း- Twister ...
မိသားစုပျော်ရွှင်မှုအတွက် နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ။ ၎င်းတွင် သင်ဆင်းသက်သည့် ကစားကွက်ဘောက်စ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းကို ပံ့ပိုးရန် အရောင်များပါရှိသည့် ဖျာတစ်ခုပါရှိသည်။ ကိုယ်ဟန်က စိန်ခေါ်ပေမယ့် မင်းကို ရယ်စေမှာ သေချာတယ်။
အသက် 7+ နှစ်များအတွက် သင့်လျော်သော မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် ကတ်ဂိမ်း။ အဲဒီထဲမှာ သင်ဟာ သမိုင်းမတင်မီက ဂူမန်မျိုးနွယ်စုရဲ့ ဖိနပ်ထဲကို ရောက်သွားပြီး ကစားသမားတိုင်းဟာ ထွက်လာတဲ့ ကတ်တွေအရ ထွက်လာတဲ့ ကတ်တွေအလိုက် မျိုးနွယ်စုရဲ့ ခေါင်းဆောင်အသစ်ဖြစ်လာဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီဂိမ်းရဲ့ ဆန်းကျယ်တဲ့အချက်ကတော့ ကတ်တွေရဲ့ အသံတွေ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစုမိအောင် အလွတ်ကျက်ရမှာဖြစ်ပြီး မှန်ကန်တဲ့စနစ်နဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်...
Ugha Bugha ကိုဝယ်ပါ။
Devir - Ubongo၊ ဂိမ်း...
Ubongo သည် မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက် အပျော်ဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသက် 8 နှစ်အထက်သူများအတွက် အကြံပြုထားသည်။ ကစားသမားများသည် အပိုင်းပိုင်းများကို ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ထဲသို့ တစ်ပြိုင်နက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြပုံကြောင့် ၎င်းသည် တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ဖန်တီးသူများက အာမခံပါသည်။ သင်စတင်သောအခါတွင်သင်ရပ်တန့်နိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်စွဲလမ်းသည်။ စည်းကမ်းချက်များအရ လွယ်ကူသည်။
ကောင်းစွာရွေးချယ်ရန် အကောင်းဆုံး မိသားစုဘုတ်ဂိမ်းများမရှိမဖြစ်အသေးစိတ်အချက်အချို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-
လွယ်ကူသော သင်ယူမှုမျဉ်းရှိသင့်သည်။ ဂိမ်း၏ စက်ပြင်များကို လူငယ်ရော လူကြီးရော နားလည်လွယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
၎င်းတို့သည် အတိတ် သို့မဟုတ် ခေတ်သစ်အရာများနှင့် ပတ်သက်ပါက ကလေးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ အနည်းငယ် ဆုံးရှုံးရသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ အချိန်မကုန်သင့်ပါ။
ထို့အပြင်၊ တိကျသောပရိသတ်ကိုမရည်ရွယ်ဘဲ ပိုမိုယေဘုယျဆောင်ပုဒ်ဖြင့် လူတိုင်းအတွက် ပျော်စရာဖြစ်ရပါမည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ အကြံပြုထားသော အသက်အရွယ် ကျယ်ပြန့်မှုရှိသည်။
အကြောင်းအရာသည် ပရိသတ်အားလုံးအတွက် ဖြစ်ရမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားရမည် မဟုတ်ပါ။
မိသားစုတစ်စုလုံးအတွက်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင်အုပ်စုလိုက်ပါဝင်နိုင်သည့်ဂိမ်းများဖြစ်သင့်သည် သို့မဟုတ် မည်သူမျှမကျန်ရစ်စေရန်အတွက် ကစားသမားအများအပြားကို လက်ခံနိုင်သောဂိမ်းများဖြစ်သင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အားလပ်ခွင့်ပေးပါ » ယေဘုယျ » မိသားစုအတွက် အကောင်းဆုံးဘုတ်ဂိမ်းများ